मान्छे मरेको कति समयपछि फेरि जन्म लिन्छ ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २० असार २०७२, आईतवार ०३:०७ |
हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययनबाट जब एक सयजना मान्छे मर्छन् तीमध्ये ८५ जनाले तुरुन्तै अर्थात ३५ देखि ४० हप्ताभित्रै फेरि जन्म लिन्छन् । बाँकी १५ प्रतिशत व्यक्तिमध्ये ११ प्रतिशतले एकदेखि तीन वर्षभित्र पुनर्जन्म लिन्छन् ।
भारतको बैंगलोरस्थित आध्यात्मिक विज्ञान अनुसन्धान फाउन्डेशनले गरेको अध्ययनलाई मान्ने हो भने मर्नेमध्ये करिब ४ प्रतिशतको आत्मले भने फेरि जन्म लिनका लागि निकै लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ती आत्महरुले चार वर्षदेखि हजारौं वर्षसम्म पनि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ।
फाउन्डेशनले यो अध्ययन मैडम ब्लैवट्स्की र लेड बीटरले स्थापना गरेको थियोसोफिकल सोसाइटीसँग मिलेर संयुक्त रुपमा गरेको थियो ।
अध्ययनका अनुसार ८५ प्रतिशत व्यक्तिले मृत्यु हुने वित्तिकै तुरुन्त अर्को गर्भ पाउँछन् । यसको कारण धेरै जसो आत्महरु सामान्य शरीरधारी हुन्छन् । त्यसता सामान्य शरीरधारी व्यक्तिहरुले सजिलै नयाँ जन्म लिन पाउँछन्,उनीहरुले कुनै प्रतीक्षा गर्न पर्दैन । तर विलक्षण र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुको आत्मले भने अर्को जन्मका लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि त्यस्ता विलक्षण र प्रतिभाशाली आत्महरुले जन्मनका लागि त्यस्तै माध्यम खोज्छन् ।
पछिल्लो सय वर्षभित्र जन्मेका व्यक्तिहरुको जीवन,स्वभाव,परिवेश र आमा वुवाको स्थिति र व्यहोरा जुटाएर उक्त अध्ययन गरिएको थियो । यसमा सबै वर्गका व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराइएको थियो । तीमध्ये करिब ८ सय जनालाई पूर्वजन्मको स्मृतिमा लगेर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
प्राप्त विवरण अनुसार दुई प्रतिशत व्यक्ति यस्ता हुन्छन् जो या त खुंखार अपराधी हुन्छन् या महात्मा । यस्ता व्यक्तिहरुको आत्मले नयाँ जन्म पाउँन निकै लामो समय कुर्नुपर्छ । किनकि उनीहरुको आत्मले गर्भ पाउँन त्यस्तै खालको आमा वुवा र समय परिस्थिति आवश्यक पर्छ । राम,कृष्ण,बुद्ध,येशु,महावीर नानक,अवतारी लामादेखि रावण,कंस,अंगुलीमाल,मार,जंगेज खान,हिटलर र मुसोलोनी जस्ता व्यक्तिहरु यसका उदाहरण हुन्,जो आफ्नो क्षेत्रमा असाधारण थिए ।
Previousसहमतिका लागि कुन दलले के छाड्यो ?
Nextग्रीसको भविष्य आइतवार टुङ्गो लाग्ने